Yaa Martin Vrijland iyo sababta uu isagu iskugu xiran yahay maqaalo qoraal ah? Qoraallo yar ayaa ii sheegay in warbaahinta kale ee Netherlands ay si buuxda u kantaroolayso. Anigu waxaan u jeedaa '' xakamaynta adeega qarsoodiga ah '. Nederland, kooxda waxaa lagu magacaabaa AIVD. Si aad u xaqiijiso in, xaqiiqdii waa inaad soo dhex gasho. [...]
Yaa xusuusiya muuqaalka filimka 'Matrix' ee 1999 kaas oo qof kasta oo baaskiil ah uu si lama filaan ah u bedeli karo 'wakiilka'? Tan iyo maalintii aan bilaabay qoraal, olole weyn ayaa bilaabay inuu iga dhigo madow. Tani waxay muujinaysaa boggeeda in dhammaan walxaha uu ka muuqdo aniga iyo aniga iyo [...]
Filed in NEWS ANALYZES	by Martin Vrijland	on 1 April 2020	• 28 Comments
Filed in NEWS ANALYZES	by Martin Vrijland	on 1 April 2020	• 21 Comments
Filed in NEWS ANALYZES	by Martin Vrijland	on 31 Maarso 2020	• 24 Comments
Guud ahaan Wadarta: 1.345.774